Vehivavy Badass manjaka amin'ny dia fitsangatsanganana
Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Vehivavy Badass manjaka amin'ny dia fitsangatsanganana
Ho fankalazana ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy (IWD), Zoma 8 martsa 2019, ireo matihanina momba ny dia mampihetsi-po ireo dia miasa mba hahatonga ny fitsangatsanganana an-kalamanjana ho toerana voalanjalanja kokoa ho an'ny vehivavy manerantany.
Ny lohahevitr'ity andro ity dia ny #BalanceforBetter, mifantoka amin'ny fomba hananganana tontolo tsy mahay mandanjalanja kokoa ny tontolo iainana tsara kokoa ho an'ny rehetra. Tsy afaka tonga amin'ny fotoana tsara kokoa izy io; ao amin'ny indostrian'ny fitsangatsanganana an-kalamanjana, ny vehivavy dia tsy voasolotena ara-tantara - indrindra ny toerana misy ny mpitarika.
Araka ny tatitry ny The Adventure Travel Trade Association, "Mialoha: manara-maso ny fitarihana vehivavy amin'ny Adventure Travel," raha ny vehivavy kosa dia 60-70% amin'ny indostrian'ny dia, 38% fotsiny amin'ireo toerana misy ny birao no tazonin'ny vehivavy ao amin'ny sehatry ny traikefa nahafinaritra. ary vitsy dia vitsy ny vehivavy mpitari-dalana eo ho eo, indrindra amin'ny toerana an-dàlam-pandrosoana.
Saingy, manomboka manaparitaka ny sakantsakana amin'ity sehatra anjakan'ny lehilahy ity ny vehivavy, ary miaraka amin'ny "The Rise of the Women Adventurer" sy ireo mpamatsy dia ny vehivavy irery ihany no tonga fitomboan'ny isan'ny vehivavy mandray andraikitra amin'ny fitarihana maro kokoa ary manohitra ny toe-java-misy .
Ireto misy vehivavy vitsivitsy atosika sy tsy misy tahotra erak'izao tontolo izao izay miasa isan'andro mba hanao ny marika amin'ny dia fitsangatsanganana.
Mpitondra ny dia - India, Nepal & Bhutan
Adventures Habitat voajanahary
Payal Mehta dia mety nandany ny fahazazany tany an-tanàn-dehibe Mumbai, fa ny fitiavany ny any ivelany no nahatonga azy ho lasa Nat Hab Expedition Leader, mitarika ireo mpandeha manerana ny faritra lavitra sy ala any India, Nepal ary Bhutan. Mpikambana amin'ny programa fiofanana sangany ho an'ny torolàlana safari India, Payal dia nanomboka nitety fitsangantsanganana tao amin'ny Kanha National Park any India, ary izao dia manam-pahaizana manokana momba ny ala sy mpihanika tendrombohitra voaofana. Amin'ny maha-mpitari-dalana an'i Nat Hab azy, i Payal dia mandika ny natiora sy ny kolontsaina eo an-toerana izay iarahan'izy sy ireo tarika miara-mandinika azy, ary koa amin'ny maha mpandika teny, mpampianatra ary mpandaha-teny azy rehetra.
Badass Claim to Fame: “Izaho dia tao anatin'ny fitsangantsanganana an-tendrombohitra rehetra-behivavy hatramin'ny tendrombohitra avo 6420 metatra. Sambo Fotsy any Himalaya. Niafara tamin'ny toe-javatra famonjena lehibe izahay teny an-dalana hiverina rehefa nijaly edema pulmonary avo lenta ilay mpitari-dalana anay. Saingy velona indray isika rehetra! ”
Tanjona amin'ny ho avy: “Te hanana tetik'asa fizahan-tany momba ny fiainana manokana any akaikin'ny ala aho. Ny iray izay mihoatra lavitra noho ny akanjo ara-barotra, izay tena mahatafiditra ny olona rehetra ao amin'ny fiarahamonina eo an-toerana, dia ivon-toerana ianarana ary tanterahina amin'ny fenitra ambony amin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny tontolo iainana.
Ny dikan'ny fandefasana IWD: “Manarahaba sy mankalaza ny vehivavy rehetra taloha izay niady ho an'ny vehivavy ny toeran'ny fiarahamonina, ary noho izy ireo no tiako ny mankafy ny fiainako toy ny ankehitriny. Izy io koa dia mitondra fanantenana fa hitohy ny fanaparitahana ny hafatra ary hisy ny fiovan'ny toe-tsaina amin'ny ho avy. ”
Mpitantana lefitra mpisolo toerana - Treks, Inca Trail
Fitsangatsanganana amin'ny Eksodosy
Maritza Chacanta dia reny tokan-tena mirehareha ary Inca Trail Guide taloha izay niasa mafy ho lasa Deputy Operations Manager ho an'ny Exodus Travels. Rehefa nolazaina voalohany tamin'i Maritza fa sarotra ny nanjary mpitari-dalana avy amin'ny Exodus (ny mpangataka dia mila manatrika lalam-piofanana manokana ary anisan'ny mpitari-dalana tsara indrindra hanakaramana azy), dia tapa-kevitra izy fa hiaro ny anjara asa notadiavina. Taorian'ny asa mafy sy fanoloran-tena nandritra ny taona maro dia nanatanteraka ny fampanantenany ho an'ny tenany i Maritza - ary tsy vitan'ny hoe mitarika sonia Inca, fa ny fitantanana ny asa hatrany am-piandohana mandra-piarahany miasa amin'ny porter, mpiady soavaly ary mpitari-dalana.
Badass Claim to Fame: “Ny maha reny tokan-tena dia zavatra iray tena reharehako. Amin'izao fotoana izao dia tsy mila lehilahy ny vehivavy vao handroso. Ho an'ireo reny tokan-tena any: zava-dehibe ny fahalalana fa tsy irery ianao. Afaka manana asa mahomby ianao mandritra ny maha reny mahomby anao. ”
Tanjona amin'ny ho avy: "Mamolavola tetik'asa mifandraika amin'ny tontolo iainana (famerenana ala, fanentanana madio, sns.), Ary hampiofana ny mpiasa momba ny maha-zava-dehibe ny fikolokoloana ny tontolo iainana - tsy ny fanasoavana ny diantsika ihany, fa ny fizarana ny valiny amin'ireo vondrom-piarahamonintsika. "
Ny dikan'ny IWD ho an'i Maritza: “Midika ny zon'ny olona sy ny miralenta. [Ny fahaizana] mandray fanapahan-kevitra - ary afaka amin'ny herisetra sy fanavakavahana. ”
Mpandrindra Adventure - Ekosy
Tany efitra Skotlandia
Alice Goodridge dia mitazona sledgehammer ao anaty fiarany mandritra ny ririnina, mba hahafahany milomano amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza - na manao ahoana na manao ahoana na manao ahoana ny hatsiaka misy ny loch. Satria mpilomano anaty rano mangatsiaka izaitsizy izy dia tsy matahotra tsy mahazo aina ara-batana kely - izay anisan'ny nahatonga azy te ho tonga Coordinator Adventure ho an'ny tany efitra any Skotlandia.
Ny orinasa dia mitantana ny karazana dia tian'i Alice hiaina ny tenany foana, izay midika fa mampifangaro ny fitiavany ny eny ivelany izy miaraka amin'ny fahaiza-manaony amin'ny fandaminana ny fialantsasatra maharitra sy fialantsasatra.
Badass Claim to Fame: “Milomano ny halavirako sy ny rano mangatsiaka amiko. Nilomano ny Channel English 21-kilaometatra tamin'ny taona 2012 aho sy ny halavan'ny Loch Lomond 22 kilaometatra tamin'ny taona 2018, izay niseho tamin'ny alina tamin'ny 6 hariva - tamin'ny 8 maraina ny ampitso maraina. Nahavita Ice Mile koa aho tamin'ny taon-dasa, izay iray kilaometatra ny rano tao ambanin'ny 5 C ° tsy nisy wetsuit. ”
Tanjona amin'ny ho avy: “Te hisarika ny tenako amin'ny fifehezana tsy dia haiko loatra izy. Miasa amin'ny alalàn'ny fanjonoana any anaty ranomasina aho amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny fanantenana ho tonga mpitari-karena amin'ny ranomasina amin'ny ho avy. Sambo sa milomano… misy fialan-tsasatra handanianao fotoana bebe kokoa amin'ny / anaty rano! ”
Ny dikan'ny IWD ho an'i Alice: “Mbola betsaka ny tsy fitoviana eo amin'ny sehatry ny hetsika any ivelany ary ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy dia midika hoe mijery akaiky sy mijery izay azo atao momba izany. Ny fiarahamonina UK dia vehivavy 51%. Fantatsika ihany anefa fa vitsy kokoa ny vehivavy sy ny tovovavy mandray anjara amin'ny karazana hetsika any ivelany mety hitarika ny fahalianana, ny fahaiza-manao ary ny antony manosika hanao asa amin'ity faritra ity. Tiako ny hahita fitoviana lehibe kokoa amin'ny sehatry ny hetsika any ivelany sy ny isan-jato isan-jaton'ny vehivavy mpitari-dalana mitarika diany, bisikileta ary fivoy sambo any UK. ”
Explorer, mpanolo-tsaina ary mpanakanto - BC, Kanada
Laura Adams, mpitari-dia an'ny Adventure Canada, dia mpikambana matihanina ihany koa ao amin'ny Association of Canada Mountain Guides sy ny Canadian Avalanche Association ary vehivavy fahadimy tany Canada tonga mpanamarina Ski Guide feno ririnina. Manana mari-pahaizana Masters in Leadership koa izy, miaraka amin'ny fikarohana nataony mifantoka amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra sy ny fitantanana ny risika amin'ny tontolon'ny tendrombohitra. Amin'ny fotoam-pialan-tsasatra i Laura dia mitarika ireo olona maniry fatratra asa amin'ny sehatry ny fitarihana tendrombohitra an-tendrombohitra ary mpampianatra ny vehivavy amin'ny fananganana fahaiza-mitarika sy fahaiza-mitantana.
Badass Claim to Fame: “Amin'ny volana Janoary 2019 aho dia mitarika dian'ny vondrona kely iray any avaratr'i Sina; akaikin'ny sisintanin'i Kazakhstan, Russia ary Mongolia hiaina ny kolontsain'ny tendrombohitra Tuvan taloha, ary ny fitsangatsanganana an-tampon'ireo tendrombohitra 'volamena' ao amin'io faritra io. Nandeha izahay nandritra ny fotoana nikatonan'ny fifandraisan'i Shina / Kanada, izay nanampy betsaka ny mety hisian'ny fitsangatsanganana any amin'ity faritra tsy dia fantatra loatra eto an-tany ity. Nandray ny fanamby tamim-pinoana sy fiaretana avokoa izahay rehetra, ary nahazo valiny tamin'ny zavatra niainana, fiaraha-miasa, fahatokisana ary firaisan-kina. ”
Tanjona amin'ny ho avy: Mampifantoka ny asako amin'ny fampahafantarana bebe kokoa, fitantanana sy fitarihana ireo toerana sy kolontsaina manokana ireo aho izao. amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana, ny kanto sy ny lahateniko / fampisehoana.
Ny dikan'ny IWD an'i Laura: “Ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy dia miantso antsika hanome fisaorana sy fankasitrahana ireo vehivavy eo amin'ny fiainantsika sy ireo vondrom-piarahamonina izay miaina fiainana amin'ny herimpo, tsy fivadihana ary fahasoavana, izay tsy manaiky ny fomban'ny toe-javatra fotsiny, ary izay tena mitondra fahasamihafana lehibe tokoa amin'ny fiainan'ny tenany sy ny hafa. Andro iray hanomezana aingam-panahy sy hikolokoloana ireo toetra amam-panahy amin'ireo vehivavy vao misondrotra manodidina antsika izay manana nofinofy lehibe ary afaka manao ny heviny ho marina.